> Resource > Beddelaan > Youtube Video taariikhqorihii: Sida loo soo qabto Videos YouTube
"Ma waxaa jira hab lagu soo qabto wax video barta laga website youtube.com si i iyaga waqti kasta iyo meel kasta oo ka daawan kartaa?"
Waxaan qabaa in aad macnaheedu YouTube video ku duuban in ay oggolaadaan in aad in lagu soo qabto video kasta YouTube (oo ay ku jiraan clips iyo filimada) gal kombiyuutarka, xitaa gal qalabka aad la qaadi karo sida iPhone, iPad, iPod iyo PSP iwm? Jawaabtu waa haa gabi ahaanba. Maalmahan, ma ahan dhibaato weyn si aad u hesho YouTube videos dambe sababta oo ah in badan oo capturers YouTube jiray suuqa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kuwa yar kaas oo ku siin awood u leh inay qabsadaan YouTube videos labada gal kombiyuutarka iyo qalabka weli tayada qeexitaanka sare.
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ). Waxa si fudud kaa caawin kara inaad wax qabsan video ka YouTube in computer si xor ah. Laakiin haddii aad rabto in aad u daawato on qalab kasta oo mobile, sida telefoonka, kiniin ama PSP iwm, waxa kale oo aad u isticmaali kartaa taariikhqorihii weyn YouTube si ay u qoraan oo ay qabsadaan YouTube videos for qalabka. Taasi waa sida.
1 Raadi videos aad jeceshahay on YouTube
Marka aad soo dajiyo taasi oo taariikhqorihii YouTube, aad dhalisay in aan dooran daalacashada aad u isticmaasho in ay soo booqdaan YouTube. Hadda, aan bilowno mid ka mid ah daalacashada aad loo doortay in ay helaan YouTube. On goobta, kaliya ka heli iyo ciyaaro videos aad rabto in lagu soo qabto.
2 Qabsashada YouTube videos aad rabto
Orod this smart YouTube video taariikhqorihii si ha ogaado videos ciyaareed laftiisa by. Marka aad ka heli jiro "Download" icon on sare ee videos ah, kaliya waxa ay ku dhufo si aad u qabato video si toos ah. Ama riix "URL + paste" button in interface this app ee ay u qabsan halkii.
Marka lagu sameeyey, ee qabsaday YouTube videos lagu dari doonaa maktabadda this app ee. App Tani waxay kaa caawin kartaa in aad maamulato oo dhan qabsaday YouTube videos halkan. Oo weliba, aad dajiyaan kartaa videos FLV maxaliga ah ee maamulka. In maktabadda, kaliya xaq u riix margin ka dibna dooro "Import" ka dhisayaa-up menu.
3 Beddelaan YouTube videos for qalabka (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo qabsadeen YouTube videos in qaar ka mid ah qalabka lagu raaxaysto shakhsi, kaliya iyaga sax maktabadda, ka dibna riix "Beddelaan" button on geeska hoose ee midig. In ka dhisayaa-up liiska format, aad halkan ka heli kartaa oo dhan qaabab video oo caan ah iyo qalabka. Kaliya dooro mid ka mid ah sida ay magacaaga qalab. File saarka ayaa aad u haboon qalabka. Dabadiisna, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo files gediyay galka wax soo saarka si ay u qalab via cable. Waa intaas.
Sida loo Beddelaan Mpg in MOV ee Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)